मन्त्रीका छोराले किसान माथि गाडी चलाउँदा ४ जनाको मृत्यु, त्यसपछि भएको घटनामा थप ४ जना मा रि ए - Khabar Nepali
होमपेज / अन्तर्राष्ट्रिय / मन्त्रीका छोराले किसान माथि गाडी चलाउँदा ४ जनाको मृत्यु, त्यसपछि भएको घटनामा थप ४ जना मा रि ए
मन्त्रीका छोराले किसान माथि गाडी चलाउँदा ४ जनाको मृत्यु, त्यसपछि भएको घटनामा थप ४ जना मा रि ए
सोमबार, असोज १८, २०७८
नेपालको कैलालीसंग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा आइतबार भएको एउटा घटनामा ८ जनाको मृत्यु भएको छ। लखिमपुर जिल्लाको तिकुनियामा भारतको केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री अजयकुमार मिश्रका छोराले किसानहरु माथि गाडी चलाएको आरोप लागेको छ । जसवाट ४ जना किसानको निधन भएको थियो । .
एनडिटिभीका अनुसार आइतबार तिकुनियामा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। तिकुनिया केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री मिश्रको पुर्ख्यौली घर भएको ठाउँ हो। उक्त कार्यक्रमा उनी र उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्री केशव मौर्य सहभागी हुन जान लागेका थिए। केन्द्रीय सरकारले ल्याएका तीन वटा विधेयकको केही समयदेखि विरोध गरिरहेका किसानहरूले उपमुख्यमन्त्री र केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री आएपछि का लो झण्डा देखाउने कार्यक्रम राखेका थिए । आयोजकले सो कुरा थाहा पाएपछि अर्कै बाटो भएर कार्यक्रम स्थल गए ।
उनीहरूले रूट बदलेको थाहा पाएपछि किसानहरु फर्कन लागेका थिए । त्यही बेलामा राज्यमन्त्री मिश्रका छोराले चलाएको गाडी उनीहरुले देखे । राज्यमन्त्रीका छोरासंग अरुपनि छुट्टै गाडीमा आउँदै थिए । मन्त्रीलाई झण्डा देखाउन नपाएपछि मन्त्रीका छोरालाई नै उनीहरुले का लो झण्डा देखाएर विरोध गरे । त्यसपछि मन्त्री मिश्रका छोराले का लो झन्डा देखाउने किसानहरु माथि गाडी चलाए । घटनामा ४ जनाको मृत्यु भयो ।
आफ्ना साथीहरू माथि भएको त्यस्तो घटना पछि त्यहाँ अवस्था थप विग्रियो । किसानहरुले मन्त्रीका छोरा र उनका साथी चढेका गाडीमा आगजनी गरे । त्यसपछिको घटनामा थप ४ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा एक चालक र तीन जना भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। गृह राज्यमन्त्री मिश्रले भने आफ्ना छोरा घटनामा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्।
सुत्केरी गराउन अस्पताल गएकी महिलालाई डाक्टर बाटै क रणी
तीन बिरामीको ह त्या गरेकी नर्स भन्छिन्, ‘कुनै पश्चाताप छैन’
अन्तत गृहमन्त्रीका छोराले प्रहरीसामु यसरी गरे आत्म समर्पण, सबै चकित
१.तीन बिरामीको ह त्या गरेकी नर्स भन्छिन्, ‘कुनै पश्चाताप छैन’
२.छोरा आर्यनलाई छुट्याउन शाहरुख र सलमान खानले चाले यस्तो चाल, सबै चकित
३.म्याकुरीले गरे बिहे यि भारतिय नारीसँग गरे विहे, थाहा पाउनुहोस् को हुन् उनकी बेहुली
४.छोरा ड्र ग्स घटनामा जे ल गएपछि बुवाले भने ‘मैले राम्रो संस्कार दिन सकिन’
५.आर्यन खान घटनामा भयो अहिले सम्मकै कसैले नसोचेको ठूलो खुलासा, सबै चकित
६.वुवा विदेशवाट आउने खुसीमा निस्केका ८ वर्षे छोरालाई टुरिष्ट बसले ठ क्क र दियो, नातीको श व देखेर हजुरआमा बेहोस
७.साउथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल आमा बनिन्, पति गौतमसँग बच्चाको फोटो सार्बजनिक गरिन !
८.यि बलिउड अभिनेता जसले गर्छन् श्रीमतीलाई असाध्यै माया